Umbala Uyinto Yonke | January 2022
Imibala engama-37 eNgcono yoMnyango wePeyinti engaphambili-Iingcamango zePeyinti kwiiNdlu zangaphambili
Ngaba ujonge ukupeyinta umnyango wangaphambili umbala owahlukileyo? Aba bayili baveza imibala abayithandayo emnyango wangaphambili.
Iingcamango ezingama-40 zeGumbi lokuPhila eliGqwesileyo- Imibala ePeyinti ePhezulu yamaGumbi okuPhila
Yiya ngesibindi ngendawo yakho onala magumbi okuhlala angaqhelekanga kunye nemibono yepeyinti.
I-27 Imibala yeGumbi lokulala eliBalaseleyo 2021 - Ipeyinti yeMibala yeeNdawo zokulala
Vusa igumbi lokulala elinemibala kunye nale mibala yepeyinti edlamkileyo kunye nezikimu zemibala kwaye ulungele ukuqala usuku ngokuchanekileyo.
Iingcamango ezi-15 eziMnyama neziMhlophe zeGumbi lokuhlambela-Imilo emhlophe eMhlophe kunye neMhlophe esiyithandayo
Ezi zimvo zoyilo lwegumbi lokuhlambela zibonisa ukuba kutheni umbala omnyama nomhlophe unjalo ngokudityaniswa kombala.
Eyona mibala ipeyinti mhlophe- Imibala ephezulu yepeyinti emhlophe yeendonga
Kwenzeka njani ukuba icandelo elimhlophe levenkile yepeyinti likhulu kunayo nayiphi na eminye imibala? Kuba yonke indawo ifuna uhlobo olwahlukileyo lomhlophe! Sicele abayili ukuba babelane ngee-shades zabo kunye nokuba bazisebenzisa nini.
Imibala emi-16 eKhanyayo engathath'icala - Imibala yeeNdawo zoYilo ezingathathi cala
Babedla ngokuthatha isihlalo sangasemva, kodwa ukungathathi cala kwanamhlanje kukhokelela kwindlela engalindelekanga. Shift ungathathi cala ngale mibala yepeyinti yoyilo.
Iimbono ezi-15 eziMnyama eziMnyama neziMhlophe zeGumbi lokulala-uMhombiso omnyama nomhlophe
Onke la magumbi okulala abonisa ukuba kutheni umbala omnyama nomhlophe unjalo ngokudityaniswa kombala ngokwesiko kunye ne-chic. Nazi ezona zimvo zilungileyo zokuhombisa kumagumbi okulala amnyama namhlophe.
I-33 Imibala yepeyinti eBlue eKhanyayo- Imibala yabayili bePeyinti eBlue Uthando
Le mibala yepeyinti eluhlaza okwesibhakabhaka ivusa umdla kwaye iyahamba, iyahambelana nezinye ii-hues, kwaye zilungele ukuzisa ngaphandle ngaphakathi.
15 Amagumbi eMibala ePeyintiweyo aMnyama- Indlela yokuhombisa ngemibala emnyama
Uya kufuna ukuya kumnyama kwaye ubonakale ekhaya emva kokuba ubone la magumbi. Nantsi imibala efanelekileyo yokusebenzisa igumbi elimnyama.
Iintsingiselo zombala kwiFeng Shui-Isikhokelo seFeng Shui kuMbala
Sebenzisa esi sikhokelo sefeng shui kumbala xa ukhetha imibala yepeyinti kunye nokuhonjiswa okucacileyo ekhayeni lakho.
Ukupeyinta njani iikhabhathi zasekhitshini- Ezona Ngcebiso ziPhambili zePeyinti yokupeyinta
Ukutshintsha ngokupheleleyo iikhabhathi zakho okanye ukuqesha ingcali ukuze uzipeyinte kuyabiza kwangaphambili, kodwa ngethamsanqa, ukupeyinta iikhabhathi zakho yiprojekthi onokuzenzela yona ngokwakho, ngenxalenye yeendleko. Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana malunga nokupeyinta iikhabhathi, kunye neengcebiso zeengcali ezivela kwiqela likaBenjamin Moore's pro ukukukhokela kula manyathelo abalulekileyo ongafuni ukuweqa.
Iintsingiselo zombala-zithini imibala eyahlukileyo
Nokuba ufuna ukongeza amandla kwigumbi elimdaka okanye uzolile kwindawo exakekileyo, isikhokelo seNdlu entle sinokukunceda uthathe isigqibo sokuba yeyiphi imibala ekufaneleyo. Hlanganisa ii-accents ezininzi kwikhaya lakho ukuze ufumane ubomi obulungeleleneyo-kwaye obunemibala.
I-8 yangaphambili yeCango lokuPhuculwa kweMinyango- Uyenza njani kwakhona iKhaya lakho langaphambili
Sebenzisa le mibono yasekhaya ye-DIY ukunika umnyango wakho wangaphambili i-makeover.
Ukudityaniswa kweMibala eNtsha-iZikimu zoMbala ezisebenza kuyo yonke iNdlu
Abaqulunqi babelana ngokudityaniswa kombala omtsha ukuzama yonke indlu.
UBenjamin Moore usandula ukubhengeza umbala wawo wonyaka ka-2019, kwaye imalunga nokuba yeyona uyithandayo ungathathi cala. Bona iifoto kwaye ufunde ngakumbi ngomthunzi omangalisayo.
iintyatyambo zokutyala entwasahlobo
ukuzingelwa kwamaqanda epasika kubantu abadala
hudson umcebisi omtsha waseyork